क्युबा र यसको नामको उत्पत्ति | Absolut यात्रा
दानियल | | क्युबा
यो एन्टिलिसमा सबैभन्दा ठूलो टापु हो र क्यारिबियनमा एक उत्तम पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक हो। धेरै कारणहरूको लागि र एक लामो र रोचक इतिहासको साथ एक अद्वितीय र विशेष ठाउँ। तर, क्युबाको नाम कहाँबाट आयो? यसको नामको मूल के हो? यो प्रश्न हो कि हामी यस पोष्टमा समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका छौं।
सत्य भनेको शब्दको व्युत्पत्ति मूल हो क्युबा यो बिल्कुल स्पष्ट छैन र आज पनि विद्वानहरु बीच विवादको विषय हो। त्यहाँ धेरै परिकल्पनाहरू छन्, के कोही अरूहरू भन्दा बढी स्वीकार्य छन्, र ती मध्ये केही वास्तवमै जिज्ञासु छन्।
सबै भन्दा पहिले, एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु स्पष्ट हुनु पर्छ: कहिले क्रिस्टोफर कोलम्बस उहाँ पहिलो पटक (अक्टोबर २ 28, १ 1492 XNUMX on मा) टापुमा आइपुग्नुभयो, कुनै पनि समयमा उसले नयाँ महाद्वीपमा प्रवेश गरिरहेको छ भन्ने सोचेन। वास्तवमा तिनीहरूको गलत गणनाको आधारमा त्यो नयाँ जग्गा केवल सिपाang्गो मात्र हुन सक्थ्यो (जसलाई जापान त्यतिबेला चिनिन्थ्यो) जसको साथ यस टापुलाई कुनै पनि हालतमा बप्तिस्मा दिने सम्भावनालाई पनि विचार गरिएको थिएन।
क्रिस्टोफर कोलम्बस यस टापुमा अक्टोबर २ 28, १ 1492 XNUMX २ मा पहिलो पटक आदिवासीहरूको मुखबाट “क्युबा” भन्ने शब्द सुने।
वर्षौंपछि, स्पेनिशले यस खोजलाई नामको साथ राख्ने निर्णय गरे जुआना टापु, जवान राजकुमार जोनको सम्मान मा, एक मात्र पुरुष बच्चा रेज क्याटेलिकोस। यद्यपि यो नाम पक्रिएन। निस्सन्देह, यो १ 1497 19 को उमेरमा ताजको उत्तराधिकारी हुन बोलाइएको व्यक्तिको १ XNUMX XNUMX in मा अकाल मृत्युको तथ्यबाट प्रभावित भयो।
त्यस पछि फेब्रुअरी २ 28, १ 1515१XNUMX को शाही फरमानको माध्यमबाट क्युबाको आधिकारिक नाम त्यो हुने कोशिश गरियो फर्नान्डिना टापु, राजाको सम्मानमा, तर स्थान-नाम समातिएन। वास्तवमा, १ XNUMX औं शताब्दीको उत्तरार्धको आधिकारिक कार्यहरूले क्युबाको नाममा यो क्षेत्रलाई मात्र जनाउँदछ।
1 आदिवासी मूल
2 क्यूबा शव्दको उत्पतिको बारेमा जिज्ञासु परिकल्पना
2.1 पोर्तुगाली सिद्धान्त
2.2 अरब सिद्धान्त
आज "क्यूबाको नाम कहाँबाट आउँदछ" भन्ने प्रश्नको सबै भन्दा स्वीकार्य विवरण भनेको त्यो हो स्वदेशी मूल.
धेरै क्युवालीहरूले यस विचारलाई मन पराउँछन् कि उनीहरूको देशको नाम पुरानो स्वदेशी शब्दबाट आएको हो: क्युबा, सायद बोल्ने भाषामा Tainos। यो शब्दको अर्थ हुन्छ "भूमि" वा "बगैचा"। यस सिद्धान्तका अनुसार यो कोलम्बस आफैले पाएको हुनुपर्छ जसले यस सम्प्रदाय पहिलो पटक सुनेका थिए।
यसबाहेक, यो सम्भव छ कि यो शब्दलाई अन्य क्यारेबियन टापुहरूका अन्य आदिवासी मानिसहरूले प्रयोग गरेका थिए, जसका भाषाहरू उही जराबाट आएका थिए, अरौका भाषिक परिवार।
क्युबाको नाम कहाँबाट आयो? केही विज्ञहरूका अनुसार यसले हिमाल र उचाइलाई संकेत गर्न सक्छ
उही स्वदेशी परिकल्पनामा, त्यहाँ अर्को रूप छ जसले सुझाव दिन्छ कि यस नामको अर्थ उचाइ र हिमालहरू हुने स्थानहरूमा सम्बन्धित हुन सक्छ। त्यो उचित रूपमा केहि स्थान नामको साथ प्रदर्शन गरिएको देखिन्छ क्युबा, हैती र डोमिनिकन रिपब्लिक.
बाबा बार्टोलोमा डे लास कासस१ 1512१२ र १1515१ between बीचको टापुको विजय र प्रचारकार्यमा भाग लिने व्यक्तिले ठूला ढु stones्गा र हिमालहरूको पर्यायवाचीका रूपमा "क्यूबा" र "सिबाओ" शब्द प्रयोग गरे। अर्कोतर्फ, त्यस दिनदेखि र आज सम्मको आदिवासी नाम क्युबानाकन देश र पूर्वी केन्द्रको पहाडी क्षेत्रहरूमा।
यसैले क्युवाको नाम ती केस मध्ये एक हो जहाँ परिदृश्यले देशलाई यसको नाम दिन्छ। दुर्भाग्यवश, Taino र एन्टिलियन भाषाहरूको बारेमा हाम्रो हालको ज्ञानको अभावले हामीलाई यो अधिक जोड दिन रोक्दछ।
क्यूबा शव्दको उत्पतिको बारेमा जिज्ञासु परिकल्पना
यद्यपि क्युबाको नाम कहाँबाट आएको भन्ने बारे इतिहासकार र भाषाविद्हरुमा केही सहमति भए पनि अन्य जिज्ञासु परिकल्पनाहरू पनि उल्लेखनीय छन्।
त्यहाँ पनि छ पोर्तुगाली परिकल्पना क्युबाको नाम कहाँबाट आयो भनेर वर्णन गर्न, यद्यपि हालसालै यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरीएको छ। यस सिद्धान्त अनुसार, शब्द "क्यूबा" दक्षिणी पोर्तुगलको एउटा शहरबाट आएको हो जुन त्यो नाम बोकेको छ।
पोर्चुगाली शहर क्युबामा कोलम्बस मूर्ति
पोर्तुगाल को "क्यूबा" क्षेत्र मा अवस्थित छ बैक्सो एलेन्टेजो, बेजा शहर नजिक छ। यो कोलम्बसको जन्मस्थल हुँ भनेर दाबी गर्ने ठाउँहरू मध्ये एक हो (वास्तवमा शहरमा खोजकर्ताको मूर्ति छ)। यस सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने विचार यो हो कि उसले आफ्नो जन्मभूमिको सम्झनामा क्यारिबियन टापु बप्तिस्मा लिएको हुनुपर्छ।
यद्यपि यो जिज्ञासु परिकल्पना हो, यसमा ऐतिहासिक कठोरताको अभाव छ।
पहिलेको भन्दा अझ बढि विदेशीहरू, यद्यपि यसका केही समर्थकहरू छन्। उनको अनुसार, शीर्ष नाम «क्युबा of को एक भिन्नता हुनेछ अरबी शब्द कोबा। यो मस्जिदहरू डिजाईन गर्न प्रयोग गरियो जुन गुम्बजमा माथि छ।
अरब सिद्धान्त क्रिस्टोफर कोलम्बस, को अवतरण साइट मा स्थापित छ Bariay बेहाल हाल होल्गुइन प्रान्तमा। त्यहाँ यो समुद्री तटको नजिकका पहाडहरूका सपाट आकारहरू हुने थियो जसले अरब कोबासको नेभिगेटरको सम्झना गराउँथ्यो।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » क्युबा र यसको नामको उत्पत्ति
ब्राजिलियन वनस्पति विलुप्त हुने खतरामा छ